ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: GTC ကျောင်းသူဘ၀ အမှတ်တရ (၂)
ရေးပြီးချိန်: 3/03/2008 03:16:00 AM
one of my favorite topic! especially drinking "htan yae". pls write more about your transition to ygn from kayah state.
ဟုတ်တယ်။ ထန်းရည်သောက်တာနဲ့ ဖဲရိုက်တာကို တော်တော်များများ သဘောကျကြတယ်။ :P
s0wha1: မဆိုလိုထားပါဘူး။။။ နောက်ပြီး တကယ့် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို မပြောထားဘူး။ ကျောင်းဆင်းခါစ ဆရာတန်းလုပ်ရတဲ့ ဆရာတွေအကြောင်းကို ပြောထားတာ...
18 Mar 08, 21:17
s0wha1: နောက်တခု ကျန်သေးလို့... ဆရာတွေ ညံ့တယ်လို့ ပြောချင်တာလည်း မဟုတ်။ အသုံးမကျတဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြောင့် ဆရာတွေကလည်း တကယ် မတတ်၊ ကျောင်းသားတွေကလည်း ဘာမှ မသိကို ပြောချင်တာပါ။ ဆရာတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ ညံ့တယ်လို့
18 Mar 08, 21:13
s0wha1: ခဏခဏ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် လူတိုင်း ရှင်းခနဲ မြင်သွားအောင် ရေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်။။။ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
18 Mar 08, 21:12
s0wha1: ကျွန်မစာကို သေချာ မဖတ်လို့ဘဲလား၊ ကျွန်မကပဲ လူနားလည်အောင် မရေးတတ်လို့ပဲလား မပြောတတ်ဘူး။ တချို့လာလာပြောကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေက ကျွန်မ ဆိုလိုချင်တာ တခြား၊ သူတို့ ထင်မြင်ယူဆပြီး လာထောက်ပြတာ တခြား ဖြစ်နေတာကို
18 Mar 08, 21:11
s0wha1: ကျွန်မ ကြုံဖူးတာကို အရင်းအတိုင်း ရေးထားခြင်းဖြစ်၍ ပညာရည်မပြည့်ဝဘဲ ဆရာပြန်လုပ်နေရသူများကိုသာ ကျွန်မ ရည်ရွယ်ပြောဆိုပါတယ်။
18 Mar 08, 21:10
s0wha1: ကိုရွှေမိုးလား၊ မရွှေမိုးလာတော့ မသိဘူး... ကျွန်မပို့စ်မှာ ကျွန်မတို့ထက် အသက် ၃၊၄နှစ်သာ ကြီးသော ဆရာများလို့ ပြောထားပါတယ်။ ဆရာကြီးတွေ၊ တကယ်တော် တကယ်တတ်တဲ့ ဆရာတွေကို ကျွန်မ ပြောမထားပါ။။။
18 Mar 08, 21:08
s0wha1: အန်တီငြိမ်းရေ... မျှော်နေ၏... မောင်လေး ပြည့်စုံ ပျော်ရွှင်စရာ ခရီးဖြစ်ပါစေ...
18 Mar 08, 16:23
shwemoe: ဆရာ/မကြီးများမှအများစုမှာAGTI ဒီပလိုမာများသာဖြစ်ကြပါတယ်။ဤ
shwemoe: ကိုသွားဖူးခဲ့ရင်သိ် နိုင်ပါတယ် ။ကန်တော့ခံ
shwemoe: GTI ကျောင်းပေါင်းစုံဆရာကန်တော့
shwemoe: (ဒီနှစ် ၁၃ ကြိမ်မြောက်)
shwemoe: AGTI ဒီပလိုမာလက်မှတ်ရဆရာများမှဒီပလိုမာ သင်တန်းများအား
shwemoe: ဝမ်းရေးအရပဲဖြစ်ဖြစ် "ဆရာ"ဆိုတဲ့ပိုး ဝင်သွားကြရင်ကိုယ်တတ်
18 Mar 08, 16:18
18 Mar 08, 16:16
shwemoe: သာခန့် သင်ကြားပေးရပါတယ်။ဘာသာရပ်တိုင်းကိုကျွမ်းကျင်
shwemoe: များသည်တဦးလျင်အနဲဆံုး ၃ဘာ
shwemoe: သာအဓိကပါ။GTC မှဆရာ/မ
18 Mar 08, 16:15
shwemoe: သင့်ပါ။ဒီနေ့ မိမိနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်
shwemoe: ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ဆရာများန
shwemoe:်GTC အမှတ်တရ ကိုဖတ်ပြီးကျောင်းသားဘဝကိုနားလည်ခံစား